Misaotra anao nanokana fotoana hamoronana fombafomba fampianarana ho an'ny fikojakojana ireo valizy taloha. Izaho dia nanolo ny isa, ny coil ary ny condenser tamin'ny Johnson 1958hp tamin'ny 10 izay manaraka ny fombanao amin'ny fametrahana isa. Raha apetrako amin'ny Top mark ny cam miaraka amin'ireo teboka misokatra mankany .20 ary atsofohy ny flywheel, ampifanarahana amin'ny lakile, ny marika eo amin'ny flywheel izay hampiasako hametrahana ireo teboka dia tsy eo akaikin'ny marika roa eo amin'ny takelaka magneto. Nesoriko tokoa ilay takelaka magneto (nosoloina tariby plugina) ary napetraka indray aho, tsy maintsy hahemotra ve ilay takelaka rehefa manaraka fomba iray manokana? Sa mifanaraka amin'ny marika manokana?
Mihevitra aho fa iray ihany ny fomba hametrahana ilay takelaka magneto. Tsy misy fanitsiana.
Misy fanoratana roa nataoko ho an'ny rafitra fandrehitra. Nanao iray ho an'ny 3.0 Evinrude ary iray hafa ho an'ny 5.5 Johnson. Nanoratra azy ireo tamin'ny fotoana samy hafa aho, ary mifameno izy ireo, koa mamporisika anao aho hamaky azy roa. Samy manana ny rafitra fandrehitra ireo roa ireo sy ny moterao. Heveriko fa ny 5.5 dia manao asa tsara kokoa amin'ny fanazavana ny hevitrao. Ao aho no manazava fa mety mila manitsy ny elanelam-potoana ianao mba hahatonga azy io ho eo afovoan'ny marika rehefa misokatra ireo teboka. Raha tsy manana marika amin'ny flywheel anao amin'ny varingarina faha-2 ianao dia mety mila manamboatra ny anao amin'ny maranitra eo amin'ny lafiny mifanohitra na 180 degre. Iray ihany ny marika eo amin'ny fototry ny stator.
Manantena aho fa tsy nampifangaro anao. Raha mbola mila fanampiana ianao dia azoko atao ny manondro anao amin'ireo manam-pahaizana tsara kokoa noho izaho.
Misaotra tamin'ny valiny. I ...
Misaotra tamin'ny valiny. Niahiahy aho fa iray ihany ny toerana ho an'ny takelaka fitaovam-piadiana, noho ny fifandraisana amin'ny throttle. Amin'ireo ohatra roa ireo (3.0 sy 5.5), dia lazaininao fa "Rehefa eo anelanelan'ny marika roa eo amin'ny takelaka fitaovam-piadiana ny marika ara-potoana eo amin'ny flywheel dia tokony hisokatra ireo teboka ary hiova 0 metatra tsy voafetra ny ohm metatra." Rehefa eo amin'io toerana io ny marika ara-potoana, dia mamaky aotra ny metatra. Raha esoriko ilay flywheel (tsara) dia tsy eo akaikin'ny teboka avo ny kiraron'ireo teboka amin'ny cam dia marihina fa "Top". Raha avadiko ho feno ny famaranana hampihetsiketsika ny takelaby, dia azoko atao ny manakaiky an'i Top, fa tsy amin'ny Top.
Namaly ny Misaotra tamin'ny valiny. I ... by Matt
Azonao antoka ve fa manana teboka mety amin'izany motera izany ianao? Manontany tena fotsiny.
napetraky sos911 amin'ny Mon, 06 / 22 / 2020 - 12: 13
Izaho dia mitady starter recoil rechercheur ho an'ny fiara mpitondra sambo (1956 Johnson QD-17 10HP). ilay iray mandeha moto izao dia tapaka amin'ny afovoany. misy manana torohevitra na aiza na aiza mba hahazoana loharanom-baovao hisolo toerana. INDRINDRA INDRINDRA